Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: Oktoobar 14, 2021
$ 415M ee Shaqaynta Washington (WW) meheradaha yaryar ee gurmadka degdegga ah
$ 9.7M Wareega 1: $ 10,000 ilaa 1,508 meheradood.
$ 8.8M Wareega 2 ee ADOs: $ 2500- $ 10,000 ilaa 1,574 meheradood.
$ 94.3M Wareega 3: $ 12,500 oo lagu qiyaasey 7,931 meheradood (oo ay ku jiraan $ 4,500 ilaa qiyaastii. 660 qaataha deeq bixiyeyaasha adkeysiga ee ku dhacay meherado ku dhex leh qaybaha mudnaanta leh)
$ 234M Wareega 4 -aad: Deeqaha ilaa $ 30,000 ilaa 11,728.
$ 2.4M Wareegga Gargaarka Ganacsiga Xuduuda. Deeqaha ilaa $ 50,000.
$ 30M maalgashi aasaasi ah oo loogu talagalay Sanduuqa Flex ee Ganacsiga Yaryar kaas oo siiya daymo dulsaar ah ganacsiyada yaryar, gaar ahaan kuwa ku jira bulshooyinka taariikh ahaan aan lahayn.
$ 14.2M oo deeq ah oo loogu talagalay 89 beeraleyda qolofleyda, 111 suuqyada beeraleyda, 490 warshad -khamri, warshadaha qamriga, khamriga iyo sideries, iyo 149 ganacsiyada agritourism,. Deeqdan wuxuu iskaashi la lahaa Waaxda Beeraha ee Gobolka Washington.
$ 10.8M loogu talagalay Deeqaha Soo-kabashada Bulshada ee aan macaash doonka ahayn iyadoo lala kaashanayo ArtsFund. Eeg liiska dadka qaata.
$ 2.25M si loo taageero 31 ruug-caddaa ururrada aan macaash doonka ahayn, iyadoo lala kaashanayo Waaxda Arrimaha Ciidammada ee gobolka. Eeg liiska dadka qaata
$ 21.2M oo loogu talagalay deeqaha adkeysi ganacsi: $ 8,000 ilaa qiyaastii 2646 meheradood.